नगरपालिका शिल, सञ्चालनमा रहेका विद्यालय पुनः बन्द - नेपालबहस
नगरपालिका शिल, सञ्चालनमा रहेका विद्यालय पुनः बन्द
| ९:२५:५१ मा प्रकाशित
१२ असोज, बैतडी । कोरोना सङ्क्रमणका कारण एक जनाको मृत्यु भएपछि बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका क्षेत्रलाई अनिश्चितकालका लागि शिल गरिएको छ । नगर उपप्रमुख जानकी ऐर ‘बम’को अध्यक्षतामा आइतबार बसेको आकस्मिक बैठकले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म नगरपालिका क्षेत्र शिल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सोही दिनदेखि स्वास्थ्य सेवाबाहेकका अन्य सम्पूर्ण सरकारी, गैरसरकारी कार्यालयका सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द रहने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकामा रहेका सबै विद्यालय, वित्तीय संस्था, सरकारी कार्यालयहरु बन्द रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर चन्दले जानकारी दिए। उनले भने, “सबै प्रकारका व्यापार, व्यवसाय र यातायात सेवा पनि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ, आवतजावतमा पनि पूर्णरूपमा बन्द गरिएकाले एक वडाबाट अर्को वडामा पनि आउन जान पनि रोक लगाएका छौँ ।”
भारतको बैङ्लोरबाट फर्किएका पुर्चौडी–३ का २९ वर्षीय पुरुष घर पुग्नै लाग्दा शुक्रबार स्थानीय लामाधारमा मृत फेला परेका थिए । मृत भेटिएका ती पुरुषको शनिबार गरिएको परीक्षणमा कोरोना पुष्टि भएका थियो । कोरोना पुष्टि भएपछि नगरपालिकाको बैठकले ती पुरुषको सम्पर्कमा आएकाहरुको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षण गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
छ दिनअघि बैङ्लोरबाट हिँडेका ती पुरुष बिहीबार कैलालीको गौरीफण्टा नाकाबाट नेपाल भित्रिएको बताइएको छ । गौरीफण्टादेखि मृत भेटिएको स्थानसम्म ती पुरुषको सम्पर्कमा आएका र उनी चढेर आएका सवारी साधनका स्टाफ र यात्रुहरुको पनि कोरोना परीक्षण गरिने भएको छ ।
पुर्चौडीमा अहिलेसम्म २० जनामा सङ्क्रमण पुष्टि हुँदा आठ जना अझै सक्रिय सङ्क्रमित छन् । मृत भेटिएका व्यक्तिमा कोरोना पुष्टि हुँदा गाउँमा त्रास फैलिएको स्थानीय अनिरुद्र जोशीले बताए । उनले भने, “भारतबाट फर्किएर गाउँमै पुगेर कोरोनाका कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएपछि त्रास बढेको छ ।”
विद्यालयहरु पुनः बन्द
पुर्चौडीका विद्यालयहरु पुनः बन्द भएका छन् । लामो समयदेखि बन्द रहेका विद्यालय असोज ७ गतेदेखि सञ्चालनमा आएका थिए । असोज ७ देखि सञ्चालनमा आएका विद्यालय आजदेखि पुनः बन्द भएका नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख दिनेश नागरीले जानकारी दिए । उनले भने, “नगरपालिकाले अनिश्चितकालका लागि नगरक्षेत्र शिल गर्ने निर्णय गरेसँगै विद्यालय पनि बन्द भएका छन्, आइतबार विद्यालय सञ्चालनमा आएका भए पनि पछि नगरपालिकाले सूचना निकालेपछि बीचमै बन्द गरेका छौँ ।”
पुर्चौडी–३ का २९ वर्षीय युवकको कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनुका साथै अन्य आठ नयाँ सङ्क्रमित थपिएपछि नगरक्षेत्र सिल गरिएको हो । विद्यालय पुनः बन्द हुँदा विद्यार्थीलाई समस्या भएको शिक्षा शाखा प्रमुख नागरीको भनाइ छ । शिक्षण सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ अनुसार विद्यालयमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालनमा आएका विद्यालय पुनः बन्द गर्नुपर्दा पठनपाठनमा समस्या देखिएको उनले बताए । उनले भने, “यसअघि नगरपालिका कोरोना सङ्क्रमित मुक्त भएकाले विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएका थियौँ, अब नगरपालिकाले अर्को निर्णय नगर्दासम्म विद्यालय बन्द रहन्छन् ।”
पुर्चौडीमा ७५ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ३९ ओटामा क्वारेन्टाइन कक्ष र आइसोलेसन कक्ष राखिएका थियो । नगरका ७५ सामुदायिक र तीन संस्थागत विद्यालयमा करिब १४ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । बैतडी जिल्लाभरि हालसम्म ४०३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
एक वाणिज्य बैंकसहित चार कम्पनीको २ करोड १३ लाख कित्ता शेयर सूचीकृत, कुनको कति ? ११ घण्टा पहिले
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ? १७ घण्टा पहिले
निषेधाज्ञा थपियो: मेयर चढ्ने गाडी कोरोना नियन्त्रणमा १४ घण्टा पहिले
रोल्पामा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्दा विवाद २ दिन पहिले
वालिङमा ७८ संक्रमितले कोरोना जिते २ दिन पहिले
बेनपाको नयाँ प्रशासनिक भवन ५ दिन पहिले
आगामी जेठ २ गतेदेखि ‘भेरोसेल’को दोस्रो मात्रा लगाइने २ दिन पहिले
कोरोना उपचाररत विपन्न व्यक्तिलाई नगरपालिकाको सहयोग ४ दिन पहिले
अक्सिजनको अभाव, उत्पादन भन्दा माग दोब्बर ४ दिन पहिले
भारतमा नयाँ संक्रमितको संख्या घट्न थाल्याे २ दिन पहिले
नेपालमा स्वास्थ्य उपकरण सहयोग गर्दै जर्मनीका गैसस १ दिन पहिले
तीव्रत्तर रुपमा फैलिदै संक्रमण, ६७ जिल्लामा निषेधाज्ञा ६ दिन पहिले
नौ महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी २३ करोड राजस्व सङ्कलन ३ हप्ता पहिले
नगर प्रमुख चन्दबाट अक्सिजन खरिद गर्न चेक हस्तान्तरण २ हप्ता पहिले
नागरिक लगानी कोष र नेशनल लाईफको ९६ हजार कित्ता संस्थापक शेयर बिक्रीमा, प्रतिकित्तामूल्य कति ? २ हप्ता पहिले
झापाका संक्रमित पत्रकारको घरमै औषधि २ दिन पहिले
निषेधाज्ञापछि तरकारीको बिक्री वितरणमा कमी १ दिन पहिले
फिट इन्टरनेशनल फेसबुकसँग सम्झौता गर्ने नेपालको पहिलो डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी ५ दिन पहिले
ब्राजिलमा २४ घण्टामा एक हजारभन्दा बढी काेराेना संक्रमितको मृत्यु ९ महिना पहिले
जङ्गलमा बाख्रा चराउन गएका काले भालुको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते २ वर्ष पहिले
प्रबन्धकको पासबर्ड चोरी गरि कृषि विकास बैंकमा २ करोड घोटाला २ वर्ष पहिले
लोकमार्गमा सास्ती उस्तै २ वर्ष पहिले